Tirada Dadkii ku Geeriyooday Qaraxii Maanta ee Hotel SYL oo sii korortay (VIDEO) - Hablaha Media Network
Tirada Dadkii ku Geeriyooday Qaraxii Maanta ee Hotel SYL oo sii korortay (VIDEO)
HMN:- Waxaa sii kordhaya saacad walba geerida dadkii wax ku noqday weerarkii ismiidaaminta ahaa ee barqanimadii maanta lagu qaaday Hotel SYL ee Magaalada Muqdisho, waxaana la sheegayaa in geerida dadkii wax ku noqdayay weerarkaasi ay gaarayaan ilaa 25 qof iyadoo dhaawacana uu yahay ila 40 qof.
Inta badan dhaawacyadii maanta ayaa waxaa la kala gaarsiiyay Isbitaalada Daaru Shifa iyo isbitaalka Madiina, iyadoona dhakhaatiirtu la tacaaleyso xaaladooda caafimaadeed. Dadka dhaawacmay waxaa qaarkood ku jira kuwo ay xaaladoodu garaabo tahay.
Wasiiro, Xildhibaano, La taliye-yaal, Saraakiil ciidan, Suxufiyiin, ayaa la’ogyahay in ay ka mid yihiin dadka faraha badan ee ee uu dhaawaca ka soo gaaray weerarkaasi.
Dumar ku ganacsanaayay goobaha ku dhow dhow Hoteelka SYL, ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkaasi, oo loo adeegsaday gaari nooca xamuulka oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay.
15 askari, ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka ku dhintay weerarkaasi ismiidaaminta. Askarta dhimatay ayaa u badneyd ilaalada masuuliyiintii dowladda ee ku sugneyd Hotel-ka SYL .
Ninkii la socday gaariga weerarka lagu fuliyay, ayaa xoog kaga soo gudbay Check Point ay ku sugnaayeen Ciidamada Dowladda, iyadoo inta aanu ku qarxin ilinka hore ee SYL Hotel, la maqlaayay rasaas ay ku soo ridayeen Ciidamada Dowladda.